चीन सजावट स्क्वाइ निर्माता र आपूर्तिकर्ता मिल्की क्राफ्टवर्क
सजावट स्क्विशी नरम र छिटो बढ्दो स्क्वीशी सामग्री (पीयू) बाट बनेको छ। यो उत्पादनलाई सजावटको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्, तनावबाट राहत पाउन वा केवल रमाइलो र खेलहरूमा! खेलौना स्टोरहरूको लागि प्रमोशन बिक्रीको एक महत्त्वपूर्ण माध्यम हो, त्यसैले धेरै खेलौना स्टोर मालिकहरू पदोन्नति हेर्न धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। विशेष गरी छुट्टी पदोन्नति, प्रभाव को कार्यान्वयन राम्रो छ भने, यो खेलौना स्टोर को लागी एक बिक्री चरम सीमा ल्याउन सक्छ, यसैले, छुट्टी खेलौना स्टोर को सबै भन्दा यी उत्कृष्ट अवसरहरु लाई याद छैन।
सजावट स्क्विशी नरम र छिटो बढ्दो स्क्वीशी सामग्री (पीयू) बाट बनेको छ। यो उत्पादनलाई सजावटको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्, तनावबाट राहत पाउन वा केवल रमाइलो र खेलहरूमा! खेलौना स्टोरहरूको लागि प्रमोशन बिक्रीको एक महत्त्वपूर्ण माध्यम हो, त्यसैले धेरै खेलौना स्टोर मालिकहरू पदोन्नति हेर्न धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। विशेष गरी छुट्टी पदोन्नति, प्रभाव को कार्यान्वयन राम्रो छ भने, यो खेलौना स्टोर को लागी एक बिक्री चरम सीमा ल्याउन सक्छ, यसैले, धेरै छुट्टी खेलौना स्टोर यी उत्कृष्ट अवसरहरु लाई याद गर्दैन। विभिन्न ठाउँहरूमा, खेलौनाको प्रयोगले धेरै मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ, जस्तै सिनेमामा पपकोर्न, कोक, खेलौनाले सजावट गर्न सकिन्छ, सर्कसमा नाक जोडेको, वा सजावटी खेलौना पदोन्नति प्रभाव प्राप्त गर्न सक्दछ। बच्चा कोठामा, खेलौनाले श्रृंगार गर, प्रिय दिन सक्छ वयस्क संग जीवन मा पूर्ण निर्भर हुँदैन, बसिरहेको कोठा, अध्ययन वा वकिल बेडरूम संग उच्छृंखल छैन, आमा वा बुबाको पूरा जीवन विचलित हुन दिँदैन, दिन खुसी ठाउँ प्यारो आफूलाई अद्वितीय संग। सामग्री धेरै सुरक्षित छ, शरीरलाई हानिकारक छैन, त्यहाँ सुरक्षा जोखिम छैन।
स्क्विसहरूसँग आराम गर्नुहोस्:
नरम, स्पर्श को नरम र सुगन्धित, स्क्विशिस तपाईंलाई आराम र डे-तनाव गर्न अनुमति दिनेछ। तिनीहरूसँग इच्छा अनुसार खेल्नुहोस् र तिनीहरूलाई क्रश गर्नुहोस्, स्क्विजहरू जहिले तिनीहरूको मूल आकारमा फर्कन्छन्, तर धेरै ढिलो। सुखद र सन्तोषजनक, तपाईं घण्टा आराम गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं जहाँ जानुहुन्छ आफ्नो स्क्विजीहरू लिनुहोस्, तिनीहरू जेबमा, तपाईंको झोलामा जान्छन् वा तपाईंको फोनमा झुण्ड्याउँदछन्। त्यसोभए तपाईं तिनीहरूलाई तनावपूर्ण जाँचको बेला आराम गर्न, मेडिकल अपोइन्टमेन्टमा वा बिहानको बसको लागि प्रतिक्षा गर्न सक्नुहुन्छ।
अघिल्लो: फूड स्क्विशी
अर्को: चरित्र स्क्विशी
सजावटको लागि स्क्विशी
कीचेन तनाव बल
चरित्र तनाव बल
खाना तनाव बल
यातायात तनाव बल